ထိခိုက်ဒဏ်ရာကနေ အမာရွတ်မကျန်အောင် ဒါတွေရှောင်ပါ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ » ထိခိုက်ဒဏ်ရာကနေ အမာရွတ်မကျန်အောင် ဒါတွေရှောင်ပါ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာကနေ အမာရွတ်မကျန်အောင် ဒါတွေရှောင်ပါ
ယခုဆောင်းပါးသည် ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ရေးသားထားသောဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာနှင့်ပံ့ပိုးမှုမူဝါဒအချက်အလက်များကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ရေးသားသူ Yun Sandi Nan Mon ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win.
အမာရွတ်ဆိုတာ မုန်းစရာကောင်းပါတယ်။ လက်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ခြေထောက်မှာဖြစ်ဖြစ် အမာရွတ်ရှိနေရင် သိပ်အရုပ်ဆိုးတာနော်။ အမာရွတ်မပေါ်အောင် လက်ရှည်ဝတ်ရတာနဲ့ ဘောင်းဘီရှည်ပဲဝတ်ရတာနဲ့ တော်တော်အဆင်မပြေဖြစ်ရပါတယ်။
ငယ်ငယ်က ဘယ်မှာကစားရင်း ဘာနဲ့ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာလေ ဆိုပြီး အမာရွတ်လေးတွေကို ငယ်ဘဝအမှတ်တရအဖြစ်နဲ့တော့ ထည့်ပြောလေ့ရှိပေမယ့် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ရလဒ်ကတော့ မလှဘူးလေ။ တကယ်တော့ ဒါတွေက မဖြစ်လာအောင် ကာကွယ်လို့ရနေတဲ့ အရာတွေပါ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတိုင်း အမာရွတ်မဖြစ်ပါဘူး။ အမာရွတ်မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ဒီ(၆) ချက်ကိုတော့ မလုပ်နဲ့နော်။
(၁) အနာကို ဒီအတိုင်းမထားပါနဲ့
အသေးစားထိရှနာလေးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သန့်စင်ပေးပြီး မဖုံးအုပ်ဘဲ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ရင် အနာကျက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားတယ်ဆိုရင် ပြန်စဉ်းစားပါနော်။ အရေပြားမှာ လေသလပ်ပြီး ခြောက်သွေ့စေတာက ရောဂါပိုးဝင်နိုင်ခြေပိုများတယ်လို့ ဆေးပညာက ဆိုပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကို ပလာစတာနဲ့ ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့် အစိုဓာတ်ထိန်းပေးလို့ အနာကျက်ခြင်းကိုအားပေးပါတယ်။ ပြင်ပက ရောဂါပိုးမွှားတွေရန်က ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
(၂) အနာပေါ်ကို အပြင်းစားတွေမသုံးပါနဲ့
အနာကို အရက်နဲ့ဆေးတာ၊ အရက်ပြန်လောင်းချတာ၊ hydrogen peroxide နဲ့ဆေးကြောတာတွေက ဒဏ်ရာရတဲ့အရေပြားအတွက် သိပ်ကိုပြင်းထန်လွန်းပါတယ်။ အများယုံကြည်ထားသလို ပိုးသေစေတယ်ဆိုတာထက် အရေပြားကိုထိခိုက်စေပြီး အနာကျက်မြန်စေဖို့၊ အမာရွတ်မကျန်ဖို့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အနာကိုသန့်စင်တယ်ဆိုတာ ဖုန်အညစ်အကြေးတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကို ဖယ်ရှားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရေနဲ့ဆေးကြောရင်ပဲ လုံလောက်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် အနာဘေးတဝိုက်ကို ဆပ်ပြာအပျော့စားနဲ့ ဆေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) ဈေးသက်သာတဲ့ဘက် ဦးစားမပေးပါနဲ့
အနာကျက်ဆေးတွေ၊ ပိုးသတ်ဆေးတွေဆို ဈေးကွက်မှာ အမျိုးအစားစုံရှိနေတဲ့အတွက် ဈေးချိုတာကိုဝယ်မိတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက်နဲ့ ငွေကြေးပမာဏအနည်းငယ်ကွာခြားမှုအတွက် ဘယ်ဟာကို ဦးစားပေးမလဲ စဉ်းစားပါနော်။ ဥပမာ -ထိခိုက်ဒဏ်ရာအတွက်ဆို အရည်အသွေးကိုအသိအမှတ်ပြုထောက်ခံပြီးသားဖြစ်တဲ့ Betadine လို ဆေးရည်မျိုးကို ရွေးချယ်တာမျိုး။ အရည်အသွေးမကောင်းတဲ့ ဈေးပေါတာတွေသုံးမိရင် အနာကျက်သင့်တဲ့အချိန်ထက်ပိုကြာပြီး အမာရွတ်ကျန်နိုင်ခြေများပါတယ်။
(၄) ရည်ကြည်ဖုတွေမဖောက်ပါနဲ့၊ အနာဖေးမခွာပါနဲ့
အပူလောင်နာမှာဖြစ်လာတဲ့ ရည်ကြည်ဖု သို့မဟုတ် အနာမှာတက်လာတဲ့အနာဖေးတွေကို မဖောက်၊မခွာပါနဲ့။ သွားထိလိုက်ကာမှ လက်မသန့်ရင် ရောဂါပိုးဝင်ပြီး ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။
(၅) အပူလောင်နာကို ဘာမှလျှောက်မလိမ်းပါနဲ့
အပူလောင်နာကို ထောပတ်လိမ်းတာ၊ အရွက်ကြိတ်ရည်တွေလိမ်းတာ၊ အထူးသဖြင့် သွားတိုက်ဆေးလိမ်းတာတွေက မလုပ်သင့်တဲ့အချက်တွေပါ။ သွားတိုက်ဆေးတွေက သွားကိုဖြူဖွေးတောက်ပစေဖို့နဲ့ ကြံ့ခိုင်စေဖို့ ပြင်းတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်တတ်လို့ အနာရှိတဲ့အရေပြားကို အခြေအနေပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အပူလောင်ခြင်းအတွက်က ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ ရိုးရိုးရေနဲ့လောင်းချပေးတာက အရေးပေါ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနာသက်သာစေ၊ အရောင်ကျစေနိုင်ပြီး နီမြန်းမှုတွေကို သက်သာစေတဲ့ Betadine Ointment ကိုလိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။
(၆) အနာက နီမြန်းတာ၊ ယားတာ၊ ရောင်တာ ဖြစ်လာရင် မပေါ့ဆပါနဲ့
ယားလာတာက အနာကျက်လာတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သတိထားဖို့လိုတဲ့ အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနာအရေပြားက နီမြန်းလာတာ၊ တဒုတ်ဒုတ်သွေးခုန်တာ၊ ယားတာ၊ ရောင်ရမ်းတာဖြစ်လာရင် အနာပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ မဖြစ်လာခင် အမြန်ဆုံးကုသမှု ခံယူပါ။
အမာရွတ်မကျန်အောင် လုပ်သင့်တဲ့ (၈) ချက်
လက်ကို စင်အောင်ဆေးသင့်တယ်။ ဒါမှ အနာကိုထိတွေ့တဲ့အခါ၊ ဆေးထည့်တဲ့အခါ ရောဂါပိုးမဝင်မှာပါ။
သွေးတိတ်အောင် လုပ်ပါ။ အသေးစားထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေက သူ့အလိုလိုသွေးတိတ်သွားလေ့ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် လိုအပ်လာရင် ပတ်တီးစ သို့မဟုတ် အဝတ်သန့်လေးနဲ့ သွေးတိတ်တဲ့အထိ အသာအယာဖိထားပေးပါ။
အနာကို ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ ရေနဲ့ပဲဆေးကြောတာ လုံလောက်ပါတယ်။ ညစ်ပေနေတာ၊ အညစ်အကြေးတွေ ကပ်ငြိနေတာဆိုရင် အနာဘေးတဝိုက်ကို ဆပ်ပြာအပျော့စားနဲ့ ဆေးကြောလို့ရပါတယ်။ အနာထဲကိုတော့ တိုက်ရိုက် ဆပ်ပြာနဲ့မထိပါစေနဲ့။
အနာပိုးသတ်ဆေးထည့်ပါ။ အနာကျက်မြန်စေဖို့၊ အနာပိုးမဝင်စေဖို့ Betadine ဆေးရည်လိုမျိုး အနာပိုးသတ်ဆေးတစ်ခုခုထည့်ပါ။ Povidone-iodine ပါဝင်တာကြောင့် အနာထဲကို ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ ပိုးမွှားတွေရန်က ကာကွယ်ပေးပြီး အနာကျက်မြန်စေပါတယ်။
ပလာစတာ၊ ပတ်တီးဖုံးအုပ်ပါ။ ဆေးထည့်ပြီးတာနဲ့ ပလာစတာ၊ ပတ်တီးနဲ့ဖုံးအုပ်ပါ။ ဒါမှပြင်ပက ရောဂါပိုးမွှားတွေမဝင်အောင် အကာအကွယ်ဖြစ်စေမှာပါ။ အနာကျက်နှေးစေနိုင်တဲ့ အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကိုလည်း ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ပလာစတာ၊ ပတ်တီးကို ပုံမှန်လဲပေးပါ။ အနည်းဆုံးတစ်နေ့တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ပလာစတာမှာ ရေစိုတာ၊ ညစ်ပေတာတွေဖြစ်လာတိုင်း အသစ်လဲပါ။
မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ ဒဏ်ရာ နက်ရင် သို့မဟုတ် ထိခိုက်စဉ်က အရမ်းညစ်ပေနေခဲ့ရင် မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်ထိုးပါ။
အနာပိုးဝင်တဲ့ လက္ခဏာရှိမရှိ ကြည့်ပါ။ ဒဏ်ရာတဝိုက်မှာ နီရဲလာတာ၊ ပိုနာကျင်လာတာ၊ ပြည်တည်လာတာ၊ ပူပူကြီးဖြစ်လာတာ၊ ရောင်လာတာ လိုမျိုး အနာပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိမရှိ သတိထားကြည့်ပါ။
Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုချက်များနှင့် ကုသမှုများ မပြုလုပ်ပေးပါ။
ဖိနပ်ပေါက်တဲ့အနာ အမာရွတ်မကျန်စေဖို့ ဒါတွေကို သတိထားပါ
မျက်နှာမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ရင် အမာရွတ်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ
အနာမရင်းအောင် ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ပါ
နေအိမ်မှာထိခိုက်မိနိုင်တဲ့ မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကို ဒီလိုကာကွယ်ပါ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖျောဝါရီ 7, 2019 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖျောဝါရီ 7, 2019
Accessed Nov 26, 2018.
ကလေးတွေမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာဖြစ်လာရင် ဒီ (၇) ချက်ကိုဂရုစိုက်ပေးပါ
အနာကိုသေချာဂရုမစိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကြောက်စရာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ။
plastic surgery လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ။ ။